Top 5 Raadi My iPhone Apps u Android Phones
Waxaa jira hawlaha kala duwan iyo qaababka taas waxaa laga heli karaa gudahood telefoonka si marka telefoonka waa heli dhigo ama laga badiyay, waxa si fudud loo qaadi karaa. Android waa boosteejo ah oo sii kordhaya iyo isticmaalka barnaamijyadooda sii kordhaya si ka wayn. Waxaa jira barnaamijyadooda badan laga heli karaa dukaanka Play Google oo loo isticmaali karaa in la helo iyo raad soo telefoonada Android smart iyo iPhone kuwaas oo dhuma ama meel. Halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah barnaamijyadooda android oo loo isticmaali karaa si ay ula socdaan oo dhuma ama iPhone.
1. Xatooyo oo boobkuna Anti
Xatooyo Anti oo boobkuna waa app ah android oo ku salaysan mashruuca loo yaqaan preyproject. Waa app aad u wanaagsan u helidda qalabka sida android qalabka, iPhone, daaqadaha telefoonada iyo kiniiniyada kuwaas oo dhuma ama meel. App waxaa la heli karaa barnaamijyada badan iyo iyada oo taasi waxaan awoodi doonaa si ay ula socdaan iPhone ama telefoonka daaqadaha isticmaalaya app ee telefoonka ah android. App waxa uu leeyahay muuqaalada ammaanka u fiican. Waa 100% xor ah. iPhone lagu fog xiran kartaa adigoo app this. Camera ayaa hore iyo gadaal camera loo isticmaali karo in ay sawirada qofka waxaa iyo dhulka ku hareeraysan isticmaalaya qaado. Waxaan awood u yeelan doonaan in ay helaan goobta saxda ah ee qalabka adigoo isticmaalaya sifooyinka network. App Tani waa app sare qiimeeyo ah iyo inta badan kooxda technology sida crunchbase iyo Techcrunch ku talinaynaa app this. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo isticmaalo.
Tallaabada 1. Download app ka dukaanka play Google. Fur app iyo abuuraan xisaab. Tallaabada 2. qalabka Add to account ka. Waxaan ku dari kartaa ilaa 3 qalabka waqti kaas oo noqon kara mid ah iPhone ama qalab kale oo soo ordaya ku dhufto ee kala duwan Tallaabada 3. Hadda marka aan login akoonka waxaan awoodi doonaa inuu arko xaaladda iyo meesha uu iPhone iyo qalabka kale oo waxaa lagu daray.
2. Cerberus xatooyo anti
Cerberus xatooyo anti waa codsi android taas oo ay diyaariyeen LSDroid. Waxaa guud ahaan codsi anti xatooyo taas oo uu leeyahay User interface fudud oo uu leeyahay muuqaalada dheeraad ah oo wax ku ool ah iyo hawlaha. Users awood u yeelan doonaan in la helo oo la helo iPhone la xado ama khaldan lagu daro qalabka android adigoo isticmaalaya app this. Qalabka lagu dari karaa app xisaabta iyo gacanta fog. App wuxuu bixiyaa saddex siyaabood si ay u ilaaliyaan qalabka.
By isticmaalaya farsamada ay u hago iyada oo ay website.
By isticmaalaya SIM function isa sudhsudhan
Xakamaynta waxaa ay shaqo fog SMS.
App waxa uu leeyahay calaamado ammaan weyn. Haddii android ama iPhone waxaa dhuma ama meel kaas oo la diiwaan geliyey Cerberus app xatooyo anti account ah, ka dibna u warrami dadka isticmaala. Haddii SIM taasoo aanu oggolaan users loo isticmaalo iPhone markaas waxa ay warrami dadka isticmaala ku. Halkan waxaa ku qoran talaabooyinka loo isticmaalo:
Tallaabada 1. Download app ka dukaanka play Google. Waa lacag la'aan ah toddobaadka ugu horreeya. Tallaabada 2. Samee xisaab iyo ku daro qalabka, waxa uu. Calan su'aalo ammaanka iyo faahfaahin dheeraad ah. Tallaabada 3. fog laga xakameeyo qalabka ee xisaabta. Haddii qalabka uu lumo ka dibna isku day in aad shaqada hago inay xirto qalabka marka hore. Guddi ka GPS iyo hawlaha kale ee qalabka badiyay fog. Track hoos faahfaahinta adigoo isticmaalaya website app.
3. Raadi My Phone
Raadi My Phone waa fasal app sarre android kaas oo la qabo ammaanka heer sare ah iyo muuqaalada xatooyo anti. By isticmaalaya app this waa mid aad u fudud si ay ula socdaan hoos u qalabka loo eegin oo ah madal ay ka tirsan tahay. In app this waxaa aad u sahlan si loo soo dajiyo oo bixiya app iibsadaan si ay waxyaalo badan oo dheeraad ah ayaa la quful. Waxay leedahay muujinta a sahanka sida loo isticmaalo this GPS ee telefoonka la soo xaday oo si fudud looga heli karo, iyo dabagal. Baro sida loo isticmaalo:
Tallaabada 1. Ku rakib app ka dukaanka play Google. App waxay ku saabsan tahay 10 MB ee size. Waa lacag la'aan ah si ay isugu dayaan muddo bil ah ka dib iyo casriyayn in loo baahan yahay. Tallaabada 2. Open app iyo abuuraan xisaab. Faahfaahin ammaanka ilaalinta ee telefoonka. Bixi tirada unugyada ee iPhone taas oo loo baahan yahay in la dabagal ah. Waxaa cidduu doono diro farriin uu u ansixiyo iyo aqbal. Tallaabada 3. Sida ugu dhakhsaha badan fariin uu ansixiyo user awood u yeelan doonaan si ay ula socdaan oo ay helaan iPhone oo xitaa ay dhacdo xaalad dhigo ama laga badiyay.
4. Hel My Friends!
Raadi Saaxiibbaday way waa app bulsho kaas oo sidoo kale siisaa hawlaha xatooyo anti. App Tani waxay ka caawisaa si ay u aqoonsadaan saaxiibbadiisa iyo qalabka ay adigoo isticmaalaya app sifooyinka dheeraad ah. The qalabka iyo telefoonada oo ay tahay in la dabagal waa in lagu daraa liiska in app this. App wuxuu isticmaalaa technology GPS ay hindiseen in la siiyo goobta saxda ah ee ay hindiseen. Waa mid ka mid ah bulshada oo ay tahay mid aad u fudud oo waxtar leh ujeeddooyin xatooyo anti. Qalabka kala duwan sida iPhone si fudud loo qaadi karaa hoos. Haddii saaxiibkaa u iPhone waxaa dhuma ama meel, waxaad isku dayi kartaa app this.
Tallaabada 1. Goobidda iyo soo bixi app ka dukaanka play ah. Tallaabada 2. Samee xisaab. Waa bilaash in la isticmaalo oo bisha iyo ka dib u baahan yahay ka dib casriyeeyo. Tallaabada 3. Ku dar qalabka ka mid ah asxaabta inay naga liiska oo fariin u dirno ansixinta iyaga. Haddii ay aqbalaan fariin ansixinta aad ka dibna ay daray liiska. Haddii qalabka sida iPhone lumo ayaa xiriir la leh account ka dibna aad u yeelan doontaa in ay helaan booska uu ka iPhone lumay dhex app.
5. fiirsasho Security & Adda
Tani waa weli codsi kale oo awood leh android oo si fudud loo isticmaali karaa si ay ula socdaan hoos u qalab android, qalabka iPhone. Habkaani wuxuu ku xatooyo anti ee app waa mid aad u xoog badan. Waxaad noqon doontaa in ay helaan iPhone oo aad u qaylin oo metrik in codad buunkii si ay u kordhiyaan fursad in ay ka heli. Waxaad u baahan tahay si ay u abuuraan xisaab in app iyo dar iPhone iyo qalabka kale ee ay u galeen. HUBINTA waxaa lagu weydiin doonaa in iPhone si ay u xiriirin account app ee qalabka android. Taas ka dib waxaad awoodi doontaa inaad si ay ula socdaan telefoonka haddii telefoonka waxaa dhuma ama meel. Fiiri sida loo isticmaalo app this.
Tallaabada 1. Download app ay u qalab android dukaanka Google play. Tallaabada 2. xisaabta antitheft Calan iyo darto qalabka koontada. HUBINTA waxaa looga baahan yahay isaga oo intaa raaciyay qalabka Tallaabada 3. Haddii iPhone waa laga badiyay, ka dibna marka hore ay ula socdaan waxaa la isticmaalayo app. Haddii aad waxaadna aamineysaa in aad tahay iPhone, ka dibna waxa ay ka heli meesha ku cad app. Haddii iPhone uu lumo, waa in aad meel fog laga xirto iyo tirtir.
> Resource > iPhone > Top 5 Apps u Android Phones Helo u Khasaaray iPhone